“Haqa miliqe” kitaaba Afaan Oromoo haaraa
Kitaabonni Afaan Oromoon barreeffaman yeroo hedduu ni maxxanfamu.Barreessitoonni irra jireessis dhiirota. Keessummaan keenya har’aa garuu shamarree dhiyeenya kitaaba haaraa maxxansiiste tokko qabannee dhiyaanna.
Angaatuu Caalaa jedhamti. Shamarree umuriin waggaa 24 yoo taatu mata dureen kitaaba ishee tii “Haqa miliqe” jedha. Kennaa qabnuun eenyummaa keenya mul’isuun dirqama lammummaa ti kan jettu angaatuun aartii Oromoo guddisuun itti gaafatama nama quuqama qabu maraa ti jetti.
Kitaabota Afaan Oromoon ba’an raabsuun rakkoo guddaa biyya keessa jiru ennaa ta’u martinuu ga’ee ofii isaa yoo ba’e, kitaabota jiran iyyaafatee yoo bitate kanneen barreessan hamile cimsee hegereef illee yaadaa kanneen qaban kakaasa jetti Angaatuun Kitaaba ishee kanaaf maqaa Haqa Miliqe maaliif kennite isa jedhuun bakka dhugaan itti jal’aqte hedduun waan jiraniif haala isaa ibsuuf akka ta’e Angaatuun nuuf ibsitee jirti.